musha nyika dzakabatana Singers Alicia Keys Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yemuimbi weAmerica ane zita rezita “Lecia". Yedu Alicia Keys Yehucheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika iye zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezwi rake rekutaura uye kuendesa kwekunzwa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Alicia Keys 'biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Alicia Keys Upenyu Hwepamberi uye Nhoroondo Yemhuri:
Kutanga kubva, Alicia Augello Cook Dean akazvarwa pazuva re25th raNdira 1981 kuHell's Kitchen nharaunda yeManhattan muNew York City, USA Ndiye chete mwana akazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Teresa Augello nababa vake, Craig Cook. Muimbi anoshanduka-shanduka ndeye nyika yeAmerica ane mhuri dzakawanda. Pakupedzisira, zvakave zvichisimbiswa kuti iye wedzinza rakasanganiswa neAfro-American, Chirungu, Irland, Scottish, Itari uye Sicilian midzi.
Mucheche Keys aingova nemakore maviri ekuzvarwa baba vake pavakasiya mhuri, Nekuda kweizvozvo, aive asina-ruoko akasimudzwa naamai vake mumhuri yepasi yemhuri mamiriro ekumisidzana munzvimbo ine hukasha yeHereni Kicheni muManhattan kwaakakurira asina hama. Kukura munharaunda yakazara nematsotsi, mudiki Alicia akaoneswa huipi husinga fungidzike kubva pamhirizhonga yemumugwagwa kusvika kuzvinodhaka, chipfambi, uye zvirevo zvitatu.
Zvakanakisa zvezvinhu zvishoma zvaienderana netsika dzaKeys zvaive zvakanakisa zvinyorwa zvejazz zvakaridzwa naamai vake neSvondo mangwanani. Nguva dzekutanga dzemimhanzi dzakaburitsa hukama hweKeys nemumhanzi zvekuti akatanga kudzidziswa zvechinyakare piyano aine makore manomwe uye akashinga kunyora nziyo aine makore gumi nemaviri.
Alicia Keys Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Keys aive achiri ane makore gumi nemaviri paakanyoreswa muProfessional Performing Arts Chikoro muGehena Kicheni kuManhattan, New York City. Paaive pachikoro aidzidza mumhanzi, kutamba, theatre uye akakwidziridzwa mukwaya. Kwakave pachikoro apo paakaumba rake rekutanga mimhanzi boka aine bass-inoridza shamwari ndokuenderera mberi nekuita mune mamwe mapoka.
Pamusoro pezvidzidzo zveKeys muProperty Performing Arts Chikoro, aive nyanzvi yekuridza piyano uyo akada kuziva uye kurasa mamwe mimhanzi yemimhanzi. Wakati Keys aripo, akavandudzika pahunyanzvi hwekunyora nziyo zvakare nekuwana kuyerera uye chimiro chinoratidzwa munziyo dzake.
Alicia Keys Kurapwa Kwepakutanga Hupenyu:
Pakazosvika nguva Keys akange akura 13 iye aive mutsipa-wakadzika mumitambo yemapoka uye kutora chikamu mune zviitiko zvakarongeka. Mu1994 Keys neboka rake vakapinda muPolice Athletic League centre kuHarlem uko akaimba zvine moyo kushamisika kune vateereri vaisanganisira maneja wemimhanzi Jeff Robinson. Robinson akatora Keys pasi pekutarisira kwake maneja uye akatanga kuita gadziriro yekumugadzirira iye indasitiri yemimhanzi. Akanyora zvakare rutsigiro rwemumwe mutungamiriri wemimhanzi Peter Edge uyo akashanda naye mumisangano nevamiriri uye nhaurirano nemarekodhi zvinyorwa zvinoda kutora Keys.
Keys akazopedzisira akwereta siginecha yake kuColumbus Record iyo yakapa zvibvumirano izvo zvakanyanyisa kuregedza kusanganisira kuwana iye panguva iyoyo 15-gore-mudiki $ 26,000 chena mwana mucheche piano. Nguva yacho yakaonawo Keys akangwara akapedza chikoro chesekondari seValedictorian akagamuchira chikoro chekufunda kuYunivhesiti yeColumbia. Nekudaro, pasina nguva akabva adonha kubva kukoreji nekuda kwekunetseka zvakanyanya kubva mukudzidza uye musangano studio.
Alicia Keys Mugwagwa Wokurumbira Nhau:
Kusaina kuColumbus Record kwakazoita kushungurudzika kwaKeys sezvo chitaura chinonzi chaida kuti kunzwa kwekunyora kurongezve hunyanzvi hwake nemufananidzo nenzira dzakakodzera chimiro chavo pasina hanya nekwaari kuburitsa pachena.
Chii chimwe? Chinyorwa ichi chinonzi chakatora vanyori venziyo, vagadziri uye stylists kuzoshanda pamakiyi nemumhanzi wake Mhedzisiro yacho yaive marekodhi ezviyo zvemimhanzi zvakadzvinyirira manyorerwo aKeys ndokumuisa mune imwe mhando yekusingaperi indasitiri yemimhanzi purigatori.
Alicia Keys Rise To Fame Nyaya:
Kufamba paKeys kwakatyora chibvumirano chake neColumbia Records uye aive ne "albabless" stint neArista zvinyorwa asati ajoina J Records. Yaive naJ J marekesheni ayo Keys akaburitsa dambarefu rake rekuti "Nziyo muKudiki" musi wa5 Chikumi 2001. Iyo dambarefu - yaive nemitambo yakaita sa "Fallin", "Musikana" uye "Mukadzi Mukadzi" - yakahwina Keys mashanu Grammys Awards uye akaisa hwaro hwakasimba hwebasa rake rakabudirira.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Keys mutambi-anohwina mubairo uyo anobata vateveri ne "piano mastery, mazwi uye nezwi rinonakidza. Iye haana mashoma pane matanhatu maarubhu panguva yekunyora. Asides achiimba Makiyi anozivikanwa nekuda kwekuridza chiridzwa, murongi uye mugadziri. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Alicia Keys Hukama Hupenyu:
Achienderera mberi kuhupenyu hwerudo hwaAlicia Keys, iye haana nhoroondo yekufambidzana nekuti chibvumirano chakakosha chehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika hunozivikanwa kune vezvenhau. Nekudaro, zvinozivikanwa zvakanyanya kuti aive nehukama hwepamoyo hukama newaimbove mukomana-mukomana Kerry Hama Jr vasati vasangana nemurume wake Swizz Beatz.
Swizz Beatz muimbi wehip hop mugadziri uyo akaziva kiyi kubva vachiri vachiri kuyaruka. Mhandara dzerudo dzakatanga kuroora munaMeyi 2010 uye dzakaenda kunoroora munaJuly gore rakowo. Mubatanidzwa wavo unokomborerwa nevanakomana vaviri panguva yekunyora. Ivo vanosanganisira Egypt Daoud Dean (akaberekwa Gumiguru 2010) naGeneral Ali Dean, (akaberekwa December 2014).
Alicia Keys Hupenyu hwemhuri:
Kune vanhu vashoma avo Alicia Keys anoona semhuri, tinokuunzira chokwadi chehupenyu hwemhuri yake kutanga nevabereki vake.
Nezve amai vaAlicia key:
Teresa Augello ndiAlicia makiyi amai. Iye munhu weparagal uye wenguva pfupi mutambi uyo akasimudza Alicia musvinu uye akabatsira muimbi kuona nekuvandudza matarenda ake emimhanzi. Teresa isararoti muezve mubereki akanaka kwazvo muhupenyu hweKeys uye anotora nzvimbo pakati pehupenyu nekusimuka kwemukunda wake mukurumbira.
Nezve baba vaAlicia kiyi:
Craig Cook ndiAlicia makiyi baba. Akashanda semushandi wekubhururuka panguva yemuimbi achiri mudiki asati aenda aine makore maviri chete. Craig - uyo zvakare ane nhoroondo yebasa yekuve masseur - anga asina hukama naKeys kwemakore. Akatanga kugadzirisa fenzi naKeys muna 2006 uye anonzi anga achifambidzana naye kubva ipapo.
Nezve Alicia key vanin'ina vake:
Keys haana hama dzekubereka asi hama dzehafu dzakaberekwa kuna baba vake kubva kune imwe hukama. Idzo hama dzakazivikanwa saCole Cook uye Clay Branch. Cole akapedza kudzidza kuCentral Washington University aine degree remitambo. Iye ari padyo naKeys uye anoshanda nemurume wake Swizz Beats. Kune rimwe divi, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve Keys 'wechipiri hama mukoma Clay Branch.
Nezve hama dzaAlicia kiyi:
Kure kure nehupenyu hwemhuri hwaAlicia Keys, sekuru naambuya vake vakaonekwa saJoseph Lawrence Augello naDonna Jean Smith apo pasina marekodhi asekuru nasekuru vababa. Saizvozvowo, vanatete vaKeys, babamunini uye babamunini havana kunyanya kuzivikanwa, budiriro inoyambuka bhodhi yevanasekuru vake.
Alicia Keys Chako Hupenyu:
Iwe unoziva here kuti maKeys 'anoratidzira hunhu hunhu hunosanganisira Kuzvininipisa, kutarisa uye kungwara kwepfungwa? Yakawedzerwa kuKeys 'persona chipo chake kuzvimiririra kwekutaura uye kugona kubatana nevamwe.
Mukuwedzera, Keys inotungamirirwa naAustrarius Zodiac chiratidzo uye chakavhurika kuratidza zvinhu nezve iye nehupenyu. Iye ane zvinofarira zvemitambo yemitambo, zvigadzirwa, fashoni uye kutora mifananidzo nepo zvigaro zvake zvichisanganisira kuona, kuteerera mimhanzi yemhando yepamusoro uye kupedza nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Alicia Keys Mararamiro:
Keys ine mari inofungidzirwa yemadhora mazana mana emadhora 70 Million inotaura zvakanaka nezvemubhadharo wakakura wematarenda emimhanzi uye inotsanangura chikonzero nei mhizha dzekumusoro mimhanzi indasitiri dzinopedza hukuru kurarama hupenyu hwoumbozha.
Assets iyo inopopota yakasarudzika pairi inosanganisira $ 20.8 Million Razor House muSouth California taundi reLa Jolla. Imba inotarisisa gungwa padyo nenzvimbo inozivikanwa se - Razor Point ine makamuri mazhinji e Deluxe uye maficha epamusoro. Iyo zvakare ine yakakwana nzvimbo yekupaka yeKeys 'mota yekuunganidza iyo inozvirumbidza nezvevatasvi sevintage Ford Mustang, Lotus Evora GTE pakati pevamwe.
Alicia Keys Untold Chokwadi:
Tisati tazvitumidza kuti kuputira paAlicia Keys nyaya yemwana uye biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana chokwadi chisina kutaurwa nezvake.
Alicia makiyi akakura pane chitendero uye anga achiratidzira nezvekutenda kwake uye nekutenda kuvapo kwaMwari. Kunyanya, iye anoda kudzidza nezvezvitendero zvakasiyana uye kuwana nzira dzakasiyana dzekunamata.
Muimbi haaputi, kana kupihwa kunwa panguva yekunyora. Muchokwadi, anokanganisa maitiro ese uye akamboisa kurambidzwa kwekuwoneka kwekuputa Ads kukonsati yake.
Muviri wehunyanzvi ingangove yekupedzisira ajenda pane yemuimbi runyorwa rwezvido. Anogutsikana nekunaka kwake uye kukwirira kwe1.68m kuti maTattoo haamurove sekunaka kunodiwa.
Keys harizongori zvemumhanzi chete. Simba rake rinotambanukira kune indasitiri yemabhaisikopo kwaakakandwa mumafirimu akati wandei neterevhizheni. Inotarisirwa pakati pevakawanda ndiNanny Diaries (2007) uye Izwi reGerman.
Nezita rake reunyanzvi:
Muimbi akabhabhatidza Alicia Augello Cook Dean asi akagamuchira Alicia Keys sezita rake reunyanzvi nekuti iro rekupedzisira zita rekuti "Keys" rinoratidza kuda kwake makiyi epiyano ayo aanofunga kuti anogona kumuzarurira misuwo mizhinji.
Zvakakosha kuziva kuti muimbi anga achibatikana zvakanyanya mukubatsira kwakawanda kunosanganisira kutsigira kupihwa hutano hwevana, kusimudzira ruzivo nezve HIV / AIDS uye kubvisa kusarura.
Thanks for reading vedu Alicia Keys Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!